Orinasa mpanangona vovoka | China mpanangona vovoka mpanamboatra, mpamatsy
Fivoriambe miaro ny tontolo iainana
Rafitra fiarovana ny tontolo iainana Vovoka manangona ny vovoka faran'izay bitika (soot) vokarin'ny maripana ambony dia tsy voatsabo ary avoaka mivantana tsy misy fandaminana, izay mandoto ny tontolo iainana. Ny soot dia misy singa vy mavesatra marobe, ary ny fidofohana tafahoatra dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Ahina hipoaka koa ny vovoka avy amin'ny vovoka tena tsara. Araka ny fepetra miasa amin'ny lafaoro mamokatra vovoka, ny famoahana ny vovoka amin'ny rivodoza ...
Vovoka - misy etona flue miditra voalohany ao amin'ny mpanangona vovoka cyclone, ny poti-vovoka lehibe dia mianjera amin'ny vodin'ilay kôngy amin'ny alàlan'ny fihodinana afovoany, mba hahafahana manala ireo vovoka lehibe amin'ny vovoka.
Mpanangona vovoka karazana kitapo
Rehefa avy mivoaka avy amin'ny mpitroka hamandoana gazy dia miditra ao amin'ilay mpanangona vovoka ny entona misy vovoka. Amin'ny alàlan'ny filtration layer an'ny harato harona, ny vovoka kely kely sisa tavela ao anaty kitapo mba hahatratrarana ny vokatry ny fanesorana vovoka kely.
Desulphurizer sarimihetsika rano
Ny entona flue sy vovoka sulphide dia nidina avy tamin'ny sivana kitapo niditra tao amin'ny tilikambo boribory.
Miaraka amin'ny fahombiazany avo, fahombiazana avo lenta, fikojakojana maimaimpoana ary tombony hafa, Screw type air compressor dia manome rivotra avo lenta avo lenta ho an'ny sehatra rehetra.
Fametrahana drafitra mpankafy nitaona
Ny volavolan-tsolika narotsaka dia ampiasaina hanangonana ny etona flue hafanana avo ao anaty lafaoro, izay be mpampiasa amin'ny rivotra sy ny rivotra ao anaty vilia sy ao anaty lafaoro indostrialy.
Famoronana Hydroxide Kalsioma, Kalsioma oksida sy kalsioma Hydroxide, Fitaovana Hydroxide Kalsioma, Manao Hydroxide Kalsioma, Anaran'ny varotra calcium oxide, Fitaovana famokarana kalsioma Hydroxide,